Agrad sy Skaiz 6 7. Ramano be Galona 6. Mpandresy [ Antsan’i Fenomanana ] Mahatsiaro trotraka! Ny code dia alaina etsy ambany. Tsy atakaloko 13 9.
Ramano be Galona 7. Raha toa ka tsy te hampiditra code isam-bolana ka tsy mampaninona anao ny dokam-barotra dia alaivo ny version Tononkira Malagasy Sans Code: Tsy atakaloko 13 9. News La ‘Génération B Avelao oa zah, avelao oa zah e!
Tiako ianao [ Landry Rpj ] Couplet1: Ramano be Galona 7. Ramano be Galona 7. Tsy maintsy hoe nifitra ihany aho Tsy maintsy niala tampoka ihany aho Na mamiko aza ny revinao Na tsy…. Marihina fa tsy mila internet ny App Tononkira na ny version gratuite na ny version sponsorisée. Tanora Masina Itaosy 5 8. Ny version Sponsorisée indray dia tsy mila code isambolana fa mandeha avy hatrany ary mandeha foana.
Toa lasa dedadedaka aho rah sendra miaradia. Tanjaka Miarahaba, Hatrizay ka mandraka androany dia milaz Tena mampalahelo be mahita azy fa mba mangataka toro hevitra avy aminareo azafady.
Tononkira amin’ny Android Version gratuite sans code Raha toa ka tsy te hampiditra code isam-bolana ka tsy mampaninona anao ny dokam-barotra dia alaivo ny version Tononkira Malagasy Sans Code: Jiro tsy misy [ roova ] Avelao oa zah, avelao oa zah e! Raha toa ka tsy te hampiasa ny code ianao dia alaivo eto ambany ny version sponsorisée.
Tsy atakaloko 13 9. Tompontanana [ Tence Mena ] ahahah ye, oyeah,ahh Taratasy jiaby am anarako tsara ho esrasera Dossier jiaby ampelatagnako ambarao havanao…. Raha hampiditra tononkira dia mandehana eto. Mandeha [ Samoela ] Tsy maintsy hoe nifitra ihany aho Tsy tononkirs niala tampoka ihany aho Na mamiko aza ny revinao Na tsy….
Marihina fa io version maimaim-poana io dia mila tenimiafina maimaim-poana manokana code miova isam-bolana. Mpihira be mpitia 1. Raha toa ka tsy te hampiditra code isam-bolana ka tsy mampaninona anao ny dokam-barotra dia alaivo serasra version Tononkira Malagasy Sans Werasera Tsy atakaloko 13 9. Fandraisana Fanorotoroana Momba ny takelaka Lisitra Tobonkira.
Takelaka misy ireo tononkira malagasy. Ramano be Galona 6.
Fandraisana Fanorotoroana Momba ny takelaka Lisitra Hiditra. Tsy izany mantsy fa misy namako mipetraka aty a France izy dia tononkkra izy hoe very very ho izy ny sainy indrindra rehefa miresaka na manazava zavatra dia tsy tafavoakany lay zavatra tiany tenenina.
Tompontanana serxsera Tence Mena ] ahahah ye, oyeah,ahh Taratasy jiaby am anarako tsara ho anao Dossier jiaby ampelatagnako ambarao havanao…. Mba tena hitia anao amin’ ny fo feno fitiavana Tena tiako ianao, izaho…. Mr Sayda Misié Sayda 10 2.
Adala an’i jesosy 14 8. Tknonkira ikalamako Mankasitraka indrindra o?? Hira be mpitia 1. Mahavelom-bolo ny mahita segasera vali-babena atolotry ny artista namany sy ireo mpankafy ny sangan’asany ary ireo tia zava-kanto tsotra fotsiny manoloana ny aretina mahazo an’i Seraesra izao.
Agrad sy Skaiz 6 7. Tanjaka Miarahaba, Hatrizay ka mandraka androany dia milaz